Ubisoft နဲ့ Titan Comic တို့ လက်တွဲပြီး ဖေဖော်ဝါရီလမှာ ပွဲဦးထွက် ထုတ်ပေးသွားမယ့် Assassin's Creed Origins Comic
Assassin's Creed Origins ဂိမ်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော် ဆောင်းပါးတွေအများကြီး ရေးခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း AC စီးရီးကို စွဲစွဲမြဲမြဲ ဆော့သူဖြစ်တာက တစ်ကြောင်း၊ ဂိမ်းသတင်းနဲ့ အချက်အလက်တွေကို စာဖတ်သူတွေလက်ထဲ အရောက်ထည့်ပေးလိုစိတ် ရှိတာက တစ်ကြောင်း၊ အဲဒီလိုအကြောင်းကြောင်းနဲ့ ဂိမ်မာတွေသိသင့်သမျှ အချက်တွေကို သတင်းဆောင်းပါးတွေကနေ ပြန်လည်မျှဝေပေးနေခဲ့တာ အခုဆိုရင် အချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခု ရောက်ခဲ့ပါပြီ။
အဲဒီတော့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာမှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ AC စီးရီးရဲ့ နောက်ဆုံးအခွေ Assassin's Creed Origins ဟာဆိုရင် AC စီးရီးကို ပြန်လည်ဆန်းသစ်ပြီး နာမည်ကောင်းတွေ ရစေခဲ့တဲ့ဂိမ်းကောင်းတစ်ခု ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ဂိမ်မာတွေအားလုံးနီးပါး မပြောလည်း သိနှင့်နေပြီးပါပြီ။ AC ပရိသတ်များအတွက် Ubisoft Montreal က တကယ့်ကို ပြောင်မြောက်တဲ့ ဂိမ်းတစ်ခုကို ဖန်တီးပေးခဲ့ပြီး တစ်ဖက်မှာလည်း ဂိမ်းပရိသတ်တွေအတွက် ကွဲပြားခြားနားတဲ့ AC ဂိမ်းအတွေ့အကြုံတွေကို ပေးစွမ်းခဲ့လို့ Origins အခွေဟာ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် အကျိုးရှိစေခဲ့တဲ့အခွေလို့ ဆိုရမှာပါ။
ဒါပေမယ့် Ubisoft ဂိမ်းကုမ္မဏီဟာ အခွေကိုထုတ်ပေးအပြီးမှာ နောက်ထပ်ဆင့်ပေါင်း Edition တွေကို ဈေးနှုန်းအစားစားနဲ့ ထုတ်ပေးခဲ့သလို ၂၀၁၈ ဇန်နဝါရီနဲ့ မတ်လမှာမှ အသီးသီးထွက်ရှိလာမယ့် DLC တွေကို အချိန်ကိုက်ညှိပြီး ဈေးကွက်ထဲဖြန့်ချီဖို့ ဆိုင်းငံ့ထားတဲ့အပြင် Adidas ရဲ့ တွဲဖက်ပါတနာဖြစ်တဲ့ Yeezy နဲ့လည်း ပူးပေါင်းပြီး တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာမှ ၁၆ ရံ အတိပဲ ထုတ်ပေးမယ့် ရှားပါးစာရင်းဝင် Assassin's Creed Origins Yeezy ဖိနပ်တွေကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြန်ပါသေးတယ်။
အဲဒီလို အရှိန်အဟုန်ကောင်းကောင်းနဲ့ ကဏ္ဍပေါင်းစုံကနေ AC နာမည်ကို ကျယ်ပြန့်အောင်လုပ်ဆောင်နေတဲ့ Ubisoft ဟာ ယခုနှစ် ၂၀၁၈၊ ဖေဖော်ဝါရီလမှာတော့ Titan Comic နဲ့ပေါင်းစည်းပြီး Assasins's Creed Origins Comic ကို ပွဲထုတ်သွားဦးမယ်လို့ ဇန်နဝါရီလ ၂၉ ရက်နေ့မှာ ကြေငြာပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီသတင်းဟာ AC ဂိမ်းတွေအပြင် Comic ကို ကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေအားလုံး ဘဝင်ခိုက်အကြိုက်တွေ့စေမယ့် သတင်းဖြစ်ပါတယ်။
Ubisoft နဲ့ Titan Comic တို့ရဲ့ လက်ရာဖြစ်တဲ့ AC Origins Comic နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို နားစွင့်နေကြတဲ့ ပရိသတ်တွေအတွက် သိရသမျှအချက်အလက်တွေကို ရှာဖွေစာတမ်းပြုစုပြီး ဒီကနေ ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
Titan Comic ဆိုတာ ဘယ်သူတွေလဲ?
Ubisoft ဂိမ်းကုမ္ပဏီနဲ့ ရေရှည်လက်တွဲဖော်လိုဖြစ်တဲ့ Titan Comic ဟာ ၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာ စတင်ထူထောင်ခဲ့တဲ့ ဗြိတိန်အခြေစိုက် Comic ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာတော့ Assassin's Creed လောကနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ကာတွန်းရုပ်ပြတွေကို လစဉ်ထုတ်ပေးဖို့အတွက် Ubisoft နဲ့ စာချူပ်ချူပ်ဆိုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Titan Comic အနေနဲ့ လက်ရှိမှာတော့ Wolfenstein 2, Tekken နဲ့ Bloodborne အစရှိတဲ့ နာမည်ကျော်ဂိမ်းတွေအတွက် ကာတွန်းတွေ ရေးဆွဲထုတ်ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပြီး နောက်လာမယ့် ကာတွန်းစီးရီးအနေနဲ့ Assassin's Creed Origins Comic ကို ဖေဖော်ဝါရီလမှာ ပွဲဦးထွက် ထုတ်ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Assassin's Creed Origins Comic ဟာဘယ်လိုဇာတ်လမ်းမျိုးလဲ? ဘယ်လိုအရာတွေပါဝင်မလဲ?
ဇာတ်ကြောင်းဇာတ်အိမ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဘာမှ များများစားစား မသိရပေမယ့် တကယ့်အီဂျစ်သမိုင်းကြောင်း အထင်ကရဖြစ်ရပ်တွေ ပါဝင်ဆက်စပ်နေမယ်လို့တော့ သိရပါတယ်။ AC Origins Comic ကို တကယ့် Assassin's Creed Origins ဂိမ်းရဲ့ ဇာတ်ကြောင်းအဆုံးမှာ ဇာတ်အိမ်ပြန်ကောက်ထားတယ်လို့ သိရပြီး မာယာများတဲ့ဘုရင်မ ကလီယိုပက်ထရာ အပါအဝင် သူ့ခေတ်သူ့အခါက ဖြစ်စဉ်များကိုပါ ထည့်သွင်းသွားမယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။
ဂိမ်းကို အောင်မြင်ပြီးမြောက်အောင် ဆော့ကစားပြီးသွားတဲ့အပြင် ဂိမ်းတစ်ခုလုံးရဲ့ ဇာတ်ကြောင်းဖြစ်စဉ်တွေအပြီးမှာ နောက်ထပ် ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲ သိချင်တဲ့ ကစားသူပရိသတ်များအတွက် Titan Comic ရဲ့ Assassin's Creed Origins ကာတွန်းရုပ်ပြစာအုပ်ကို အဆင်သင့်လေး ဖတ်ရှုရုံပါပဲ။
ထွက်ရှိလာမယ့် ရက်စွဲနဲ့အတူ ဒီ Comic မှာ ဘာတွေကို မျှော်လင့်လို့ရမလဲ?
Assassin's Creed Origins Comic ကာတွန်းရုပ်ပြကို Titan Comic အနေနဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလမှာ ပွဲဦးထွက် ထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီး တစ်လတည်းမှာပဲ Bloodborne Comic ကိုပါ ထုတ်ပေးသွားမယ်လို့ ကြေငြာထားပါတယ်။ ဒါတင်မကသေးပဲ ဖေဖော်ဝါရီလအကုန် မတ်လမှာလည်း Ubisoft ဂိမ်းကုမ္ပဏီရဲ့ ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Sea Of Thieves ကာတွန်းရုပ်ပြစီးရီးကိုပါ ထုတ်ပေးသွားဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Assassin's Creed Origins Comic ဟာ မိနီစီးရီးအနေနဲ့ အပိုင်းပေါင်းလေးပိုင်း ခွဲလာမှာဖြစ်ပြီး တစ်ပိုင်းစီကို အချိန်နဲ့ကိုက်ညှိပြီး ထုတ်ပေးသွားမှာပါ။ AC Origins Comic ရဲ့ အဓိကမျက်နှာဖုံးကာဗာတွေနဲ့ ကာတွန်းရုပ်ပုံတွေကို သရုပ်ဖော်ရေးဆွဲသူကတော့ The Wicked + The Divine, Queen Of Hel နဲ့ Jean Gray Comic များနောက်ကွယ်က ကာတွန်းပညာရှင် Stephanie Hans ပဲဖြစ်ပြီး အခုလာမယ့် AC စီးရီးရဲ့ နောက်လာမယ့် ထုတ်ကုန်ဖြစ်တဲ့ Titan Comic ရဲ့လက်ရာကို AC ပရိသတ်များတင်မက Comic ပရိသတ်များပါ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့စောင့်မျှော်နေနိုင်ပြီ ဆိုတဲ့အကြောင်းကို ဒီကနေတဆင့် အသိပေးလိုက်ရပါတယ်။
GameSpot Wikia TitanComics
Ubisoft PC Games Assassin Creed Assassin's Creed Origins Assassin's Creed Origins Comic Titan Comics